Isitolo esidayisa yonke impahla 8ft & 9ft yokwakha yaseGrisi umugqa uyaxebuka Umkhiqizi kanye Umhlinzeki | Ukuxubana
Umshini wokuxebula okhuni we-2700mm ongenawo amandla ophakeme unzima umsebenzi wokungena kwe-log peeling, sebenzisa ukhuni oluqinile kanye nezinkuni ezithambile zombili, njenge-eucalyptus, i-birch, i-pine ne-poplar. Ubuso be-veneer esibutholayo buzoba bushelelezi ohlangothini kabili futhi ukushuba kuzoba khona yonke indawo. Ngokuya ngokufunwa kwamakhasimende, singenza imodeli yejubane engaguquki nemodeli esheshayo. Zombili lezi zinhlobo zisebenza kahle futhi zinconywa kumakhasimende.
Umshini wokuxebuka ongu-8ft uthengiswa ikakhulukazi eTurkey, Indonesia, Russia nase-US nakwamanye amazwe. It’anconywe kakhulu yiwo wonke la makhasimende. Sinezitifiketi ze-CE. Futhi kuzonikezwa ama-SGS uma kunesidingo sekhasimende.
Umshini wokuxebuka ongu-8ft uthengiswa ikakhulukazi eTurkey, Indonesia, Russia nase-US nakwamanye amazwe. Kunconywe kakhulu yiwo wonke la makhasimende. Sinezitifiketi ze-CE. Futhi kuzonikezwa ama-SGS uma kunesidingo sekhasimende.
I-1.I-roller roller system yokushayela ubuchwepheshe obuphambili kakhulu emakethe.
2.And isikulufa yokudla bacwiliswa okuyinto ngeke ilinyazwe imfucuza nezinkuni chips. Amafutha okugcoba adinga ukwengeza kanye ngonyaka, asindise kakhulu uwoyela wokuthambisa. Izipisi zothuli neze-veneer ngeke zikwazi ukunamathela esikulilini sokuphakela, okungeke kubangele ukuncishiswa ngokunemba komshini.
Amabili amapuleti ohlangothini wesitimela ohlangothini asesimweni sikwele futhi ubuchwepheshe bokucisha kwenza ujantshi ube nzima futhi wenza iminyaka ehlala isikhathi eside ingenamkhawulo.
Enye i-patent yethu esebenzayo ukusebenzisa i-wireless remote control ukulawula ukusebenza komshini ngaphakathi kobubanzi obungu-500m, ukuze abasebenzi babe nendlela elula nenethezekile yokusebenza.
Umshini usebenzisa uhlelo lokulawula i-PLC, i-Siemens servo motor, izingxenye zikagesi zeSchneider, ukuqinisekisa ukuthi umshini usebenza ngokunembile. Ngaphezu kwalokho, umshini unomsebenzi wokukhumbula othomathikhi, ukucindezela ukhiye owodwa ukushintshela kulungiselelo lwefekthri, noma ngabe ukusebenza okungalungile kungaxazululwa ngokushesha, ngeke kubambezele umkhiqizo wakho.
6.Ngomsebenzi wokwenza ucezu lokugcina lube ucezu lonke, kuvumela ilogi ngayinye ukuthi ithole isiqeshana esisodwa se-veneer, ithuthukise kakhulu isivuno se-veneer nenzuzo yokubuyisa.
Langaphambilini 4ft umugqa ukukhiqizwa yokwakha yaseGrisi
Olandelayo: isarha yokucheba onqenqemeni
lokuphotha ukhuni uyaxebuka umshini
wokucwebezelisa sanding umshini
umugqa ukukhiqizwa plywood